Nsuku zonke, eziningana izingane kweshumi kuleli zwe uhlala ngaphandle ukunakekelwa kwabazali. izingane ngokuvamile akulahlekele phakade, futhi abanye - okwesikhashana. Kuyinto ngabo inikezwe ngendlela Russian imfundo ekhethekile. "I inikezwe ingane," ethi ulimi non-zomthetho - kuyinto ukwamukelwa emndenini owodwa noma ngisho eziningana kwabancane lemfundo. Lokhu kuyadingeka ukuze uthole okuqukethwe kwabo okuvamile, ukuze uqinisekise ukuthi uyayithola ukunakekelwa nemfundo, kanye, yebo, ukuvikela izithakazelo zabo kanye namalungelo.
Yokugcinwa kwezingane sivikelwe
Abantu abaningi abazi ukusula umehluko phakathi zivalelwe sivikelwe? Kunomehluko, nakuba ingenkulu kakhulu imigomo esemthethweni. Ihlala in engu ingane: zivalelwe umntwana kwaba njalo uma sisekhona kweminyaka eyishumi nane. Sivikelwe - kunalokho, lapho ingane isivele unqobe lo mkhawulo yobudala ngaphambi ukuvuthwa yayo.
Kaningi kunezimo lapho ingane izohlala nobani iwuhlobo Lesisemkhatsini imfundo ngaphambi ukwamukelwa zaso zokugcina. Isizathu sokuba isidingo kwesimo inguquko esinjalo itholakala isikhathi inqubo yokubhalisa. Kulokhu, ingane ungagcina igama layo futhi patronymic. Ngaphezu kwalokho, abazali bangempela abayitholayo hhayi kuphela, kodwa, kwezinye izimo, futhi kudingeka ukuba iqhaza nokugcinwa ingane yabo. Naphezu kwakho konke lokhu amalungelo kakhudlwana futhi, Yebo, umthwalo e-trustee. Kuyinto wemfanelo phambi komthetho ukuze kugcinwe, indlela abantu abakhuliswe ngayo kanye nemfundo lesigceme sakhe. Ngesikhathi esifanayo kumelwe basize futhi olufanele zazishintsha zaba nemizimba sivikelwe futhi esitokisini, okuyinto aphoqelelwe ukuhlinzeka usizo, kokubili imfundo e ezokungcebeleka kanye nengane.
Nokugcina ingane akubhekwa imfihlakalo. Ngaphezu kwalokho, akusona isithiyo ukuxhumana ingane nezihlobo wegazi lakhe. Uma ubhalisa kule uhlobo imfundo edingekayo abakuwo zazishintsha zaba nemizimba sivikelwe nokunakekela ukwethula iqoqo elithile izikhombo, uthanda ukuba afihle lokho ayikho imibhalo ingane. Uhlu lufaka ipasipoti uma kukhona - isitifiketi somshado. Ngaphezu kwalokho, isidingo isitifiketi umsebenzi kanye nomholo. umnakekeli Ikusasa ngempela kudingeka ahlolwe yezokwelapha futhi ukwethula isitifiketi esibeka ukuthi kukhona isigwebo ngoba umonakalo empilweni noma ukuphila.
Emva kokuhambisa yonke imibhalo edingekayo, namagunya, kokucubungula zonke izimo, bahlelekela ugcine ingane. Izinkokhelo okuyinto kunqunywa isimo njalo ngenyanga ku okuqukethwe isigceme ngasinye, kuncike esifundeni lapho umkhaya ophila ngazo. Usayizi isilinganiso izibonelelo ingane lezingalo eziyizinkulungwane nambili ngalinye. Yilokho kangakanani uzophila yobudala bakhe. Ngaphezu kwalokho, yesikhathi esisodwa uthisha ikhokhelwa kancane kuka nanye ayizinkulungwane. Kwezinye izifunda, kanye enikeziwe isinxephezelo amasevisi zomphakathi inani ruble emakhulu asibhozo. Ngokungafani wobuntwana abafisa ukuhlela ugcine ingane isicelo izidingo kancane elawula mayelana iholo kanye nezindlu nezindaba. iziphathimandla ezifanele ukuqapha njalo izimo lapho umntwana ekhishelwa futhi izimpilo. Futhi phezu afinyelele ebudaleni lesigceme, Uma engenabo impahla, yithole.